झुक्किएर पनि खानुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खानेकुरा, नत्र हुन्छ अल्सरको जोखिम - Mitho Khabar
June 17, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on झुक्किएर पनि खानुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खानेकुरा, नत्र हुन्छ अल्सरको जोखिम
काठमाडौँ । ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताएको छ ? या तपाईको परिवारका सदस्य यस समस्याबाट जुधिरहनुभएको छ हुन त “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ।
ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ। यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन्।
यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ। जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियम लगायत कमी हुन जान्छ। यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोस्
एसिडिक खानेकुराको प्रयोग नगर्नुहोस्: ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन। आदि फल पर्छन्। टमाटरले पनि ग्यास्ट्राइटिस भएकाहरुलाई थप असर पुर्याउँछ। कसै-कसैले यसको थोरै प्रयोगले त्यति असर नगर्ने भए पनि खाँदैनखानु उत्तम हुन्छ।
दूध र दूधजन्य पदार्थ नखानुहोस् : दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ। दूधमा हुने प्रोटिनले पेटको भित्री भाग सुन्निने हुन्छ। यसका साथै यसले पेटमा एसिडको मात्रा बढाउँछ। तर, दही भने फाइदाजनक हुन्छ। यसमा पाइने प्रोबायोटिकले भने रोगीलाई राहत प्रदान गर्छ। यद्यपि, दहीको प्रयोग गरेर त्यसले राम्रो गरे मात्र नियमित सेवन गर्नुपर्छ।
मदिरा त झन् छुनै हुँदैन : नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्दा पनि ग्यास्ट्राइटिसको असर झन् बढेर जान्छ। तर, केही अध्ययनले भने दिनहुँ थोरै मात्रामा पिउँदा ग्यास्ट्राइटिस हुनबाट जोगाउने देखाएको छ।
चिया र कफी पनि घातक : ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित मानिस चिया र कफीबाट पनि बच्नुपर्छ । चियापत्ती र कफीमा हुने क्याफिनले ग्यास्ट्राइटिसको असरलाई बढाउने काम गर्छ । अझ दूधचिया खाँदा दूध र क्याफिन दुवैले ग्यास्ट्राइटिसलाई झन् बिगार्ने काम गर्छ । तर, ग्रिन–टीको सेवनले भने ग्यास्ट्राइटिसको सम्भावना ४० प्रतिशत कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
मसलेदार खानेकुरा झन् घातक : ग्यास्ट्राइटिसको समस्यापछि मसलेदार खानेकुराले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गर्छ पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ।
हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै ‘मेकानिजम’ हुन्छ। कुनै कारणबस यो मेकानिजममा ह्रास आयो भने ग्याष्ट्रिक हुन्छ।
ग्याष्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ-ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ। अल्सर बिग्रिँदै गएर रगत नै वान्ता हुनेसम्म हुन्छ।
यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ। जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ। यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ।
प्रशोधित खानेकुरा बार्नुहोस् : नेपालीले पछिल्लो समय प्रशोधित खानेकुराको अत्याधिक प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, यस्ता खानेकुराले ग्यास्ट्राइटिसको समस्या बढाउने गर्छ।
त्यसैले सेतो पाउरोटी, पास्ता, चिनीयुक्त खाद्यपदार्थ (चिसो पेय पदार्थ, इनर्जी ड्रिंक्स), प्रशोधित वनस्पति तेल, तेलमा तारिएका खानेकुरा, प्रशोधित मासु (ससेज, ह्याम), ट्रान्स फ्याटलगायत खानेकुरा प्रयोग गर्नुहुँदैन।
ग्यास्ट्रिक निको पार्ने घरेलु उपचार विधि थाहा छ ? यसरी गर्नुहोस् घरैमा उपचार
यस्ता व्यक्तिले भूलेर पनि नखानुहोस् सोयाबिन, नत्र…
नेपालमा थप २८ सय २८ जनामा कोरोना पुष्टि, ३ हजार ८२ संक्रमणमुक्त
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका बहुसंख्यक मानिसहरुमा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने गरेको छ। खानाको समय नमिल्ने कारणले गर्दा मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने गर्दछ त्यसैले हामीले ठीक समयमा खाना खाने गर्नुपर्छ।
ग्यास्ट्रिक भएको समयमा हामीले धेरै कुरामा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। ग्यास्ट्रिकलाई हामीले सामान्य रुपमा लिन हुँदैन। यदी ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने आन्द्राको अल्सर हुन्छ ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताएर हैरान हुनुहन्छ भने यस्तो उपायहरु उपनाउन सकिन्छः
पानी कत्तिको पिउनुहुन्छ ?
प्रशस्त पानी पिउनेः लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन । जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ । तर, पानीको सट्टा कोक, फ्यान्टा जस्ता कोल्डड्रिङसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसले पेटमा ग्याँस बढाउँछ।
हाम्रै भान्छामा छ औषधी
लसुन पानीको प्रयोगः बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग खाने हो भने ग्यास्ट्रिक भएकाहरलाई फायदा गर्छ । उच्च रक्तचाप भएकालाई समेत यसले फाइदा गर्छ।
टाईमटेबल मिलाएर खानुपर्छ
खाना समयमा खानेः ग्यास्ट्रिक भएकाहरुले समेतसम्म प्रत्येक दुई घण्टाको फरकमा खाना खाने गर्नुपर्छ । लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिएर यसले समस्या उत्पन्न गर्छ।
कागती पानीको प्रयोगः पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसले ग्याँस हटाउने काम गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन।
कार्बोहाइड्रड कम खानेः पेटमा ग्यास जमेर गाह्रो हुने भएकोले बियर, वाइन, मकै, राज्मा, बन्दा, प्याजजस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ।
के बार्ने त ?
ग्यास्ट्रिकका कारण धेरैले स्वास्थ्यसमस्या झेल्नुपरेको छ। पेटमा अतिरिक्त अमिलो जम्मा भएपछि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ। ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने अल्सर तथा क्यान्सर पनि हुन सक्छ।
जटिल खाद्य पदार्थका लागि शरीरमा एसिडको मात्रा सामान्य हुनु जरुरी पनि हुन्। एसिडिटी कम भए पनि बढी भए पनि यसले पेटमा समस्या पारिदिन्छ।
तपाईंमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तनावले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अधिक धुम्रपान र अल्कोहलले पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ। धेरै चिल्लो, पीरो, तातो खानाले पनि एसिडिटी गराउने गर्छ।
ग्यास्ट्रिकबाट बच्नका लागि ग्रीन टीको अवधारणा आएको छ। पुदिनायुक्त हर्बल चिया पिउँदा यसले ग्यास्ट्रिक कम गर्दै लैजान्छ।र, बिहान उठ्नासाथ पानी पिउँदा पनि केही मात्रामा ग्यास्ट्रिकबाट बचाउन सक्छ। यस्तै समयमा खाना खाना खाने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ।
यदि ग्यास्ट्रिकबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मसला, अचार र तेल भएको खाने कुरा पनि कम खान डाक्टरले सल्लाह दिँदै आएका छन्
“मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन के गर्ने होला”?
Coronavirus ले कसरी लिन्छ ज्यान ? सर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?